सिस्नु खानुको फाइदा र पकाउने तरिका जान्नुहोस – MeroOnline Khabar
सिस्नु खानुको फाइदा र पकाउने तरिका जान्नुहोस
नेपाल सुन्दरता र हरियालीले भरिपूर्ण देश मध्येकै देशमा गनिन्छ। यहाँ महत्वपूर्ण जडिबुटीहरु पनि प्रसस्तै मात्रामा पाइन्छ ।
नेपालको हरेक भेगमा सजिलै पाईने र सबैले मन पराउने साग सिस्नु हो । सिस्नु बूढो र छिप्पेको खानु लायक हँदैन। अहिलेसम्म तीन–चार प्रकारका सिस्नु भेटिएका छन् । भेटिएका सबै प्रजाति सेवन गर्न मिल्छ । कलिलो, फूल या मुना मात्र सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । गाउँघरमा सिस्नुलाई तरकारीको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने चलन छ ।
आज हामी सिस्नु खाँदा हुने फाइदा र पकाउने तरिकाको बारेमा उल्लेख गर्छौँ । मानिस वा पशुको हातखुट्टा भाँचिएमा सिस्नुको लेपन लगाएर काम्रो बाँध्ने चलन विद्यमान छ । सिस्नु खुवाउन थालेपछि चाँडो निको हुने हामीले देखेका भोगेका पनि छौँ । सिस्नु खाएर हुर्किएका बच्चाको हड्डी बलियो पनि हुन्छ
सिस्नुको मुन्टालाई दानाका रूपमा खुवाएको कुखुराले तुलनात्मक रूपमा धेरै अन्डा पार्ने, मासु स्वादिलो हुने र अन्डासमेत गुणस्तरीय हुने देखिएको छ । सिस्नुबाट तयार पारेको दाना खाएको कुखुराले साधारण दाना खाएको कुखुराले भन्दा दोब्बर बढी अन्डा दिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सिस्नुलाई दानाको रूपमा खुवाइएको गाईको दूधको परिमाण र दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रासमेत उल्लेख्य वृद्धि हुने गरेको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ
फुल,पात वा मुना टिपेर ल्याएपछि राम्रोसंग पानीले धुने पपखाल्ने सफा गर्ने । पानी उम्लेपछि सिस्नुलाई भाडोमा लगाउदै चलाउने । सिस्नु पकाउँदा फिट्केले फिट्दै उमाल्दै पकाउने । मुना वा सिस्नु राम्रोसँग नपाकेसम्म निरन्तर फिटिराख्दा राम्रो हुन्छ । राम्रोसंग पाकेपछि बाग्लो झोल हुदै जान्छ र तरकारी तयार हुन्छ । कतिले सिस्नुमा विभिन्न दाल (बोडी/मस्यांगको दल) संग पनि मिसाएर पकाउछन् जसले गर्दा झोल निकै बाग्लो र मिठो हुन्छ
← यी व्यक्तिले भूलेर पनि लसुन नखानुहोस् !!
काफल खानुको फाइदै फाइदा ! पहाडी जंगलमा सित्तैमा पाइने काफलका हेर्नुस औषधीय गुणहरू →